GoodData: SaaS Waxay Dalbatay Sirdoonka Ganacsiga | Martech Zone
GoodData: SaaS Baahida Sirdoonka Ganacsiga
Arbacada, Agoosto 29, 2012 Khamiista, Febraayo 25, 2016 Douglas Karr
Suuq galiyeyaal ahaan, waxaa nagu habsaday xog. Maalintii shalay ahayd waxaan horumarinayay warbixinta horumarka SEO ee iga keenay raadinta darajada, Xogta mareegaha, Xogta Google Analytics iyo Hubspot in lagu daro halbeegyada muhiimka ah isla markaana la waafajiyo warbixinta si loo hubiyo inay sax ahayd.
Xalalka Sirdoonka Ganacsiga (BI) ayaa in muddo ahba ku dhex yaallay goobta Ganacsiga waxayna caadi ahaan ahaayeen macmiil / rakibayaal server oo leh wareegyo fulin dheer leh… mararka qaarkood sannado. Xalka BI wuxuu awood ii siinayaa inaan ka soo saaro xogta mid kasta oo ka mid ah nidaamyadaas oo aan dhiso bakhaar dhexe oo kala shaandheeya, wax ka beddelaya isla markaana ku soo bandhigaya xogta qaab la isticmaali karo.
GoodData waa Software sida Adeegga Sirdoonka Ganacsiga ee Adeegga leh awood u leh inuu keeno waxyaalo xog kala duwanaan ah, duugi karo xogtaas, iyo inuu hirgeliyo muraayadaha, tilmaamayaasha waxqabadka muhiimka ah (KPIs) iyo warbixinta. Waa kan macmiil la hadlaya ka faa'iideysiga 'GoodData' si uu u horumariyo warbixinnada iyo cabirrada si fudud. Hubso inaad iska hubiso Kanaalka Youtube ee GoodData - bixinta tan oo ah webinar iyo soo bandhigid ku saabsan sida si buuxda looga faa'iideysto barxadooda.
Sida ku qoran liiskooda muuqaalada bogga, waa kuwan astaamaha muhiimka ah ee GoodData:
Dashboodyada iyo Warbixinnada - Ku indha indhee xogtaada si buuxda u la aammusin karo warbixinnada qasacadaysan ama firfircoon iyo dashboodyada adoo isticmaalaya miisaska muhiimka ah ama jaantusyada. Pivot duulimaadka iyadoo duulaya jiirka. Qeex qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka qaab-u-qaabeysan iyo ku-saleysan xeer-hoosaad, ku-carrab-hoosaad gudaha ama guud ahaan unugyada, qeex isu-geynta tiirarka ilbiriqsiyo gudahood, ka hel tirakoob deg-deg ah xajmiga gobolka adoo adeegsanaya muuqaalka jiirka, jiidaya oo hoos u dhigaya qaababka jaantuska iyo xakamaynta shakhsiyaadka wareega.
Qiyaasaha iyo Tilmaamayaasha Waxqabadka - GoodData waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay ka faa'iideystaan ​​xoogga daraasiin mitir horay loo qeexay. GoodData sidoo kale waxay abuuri kartaa jaangooyooyin caadiya oo wax ka qabta duruufaha ganacsi ee gaarka ah, qeexaan KPIs iyo la socoshada waxqabadka ujeedooyinka.
Falanqaynta Ad Hoc - Ku samee falanqaynta isbeddelada ee ka soo baxa isla markiiba sawirrada ku saleysan waqtiga. Jeex iyo xoq xogta adoo adeegsanaya aragti "sidee iyo sidee" oo dareen leh isla markaana qeexaya caadada iyo qiyaasta caalamiga / maxaliga ah, miirayaasha iyo waxyaabo kale oo badan. U adeegso kaaliyaha miiraha inaad si otomaatig ah ugu xirto xulashada, darajooyinka, kala duwanaanta ama miirayaasha isbeddelaya. Ku samee waxa-haddii falanqaynta adoo adeegsanaya hagitaan hagitaan ah ama hoos u deg oo ku wasakhoobo luuqad dhinacyo badan oo xoog badan oo haddana la akhrin karo
Wadashaqeyn iyo Wadaagis - La shaqee oo la wadaag mashruucyada, warbixinnada iyo natiijooyinka asxaabta iyo maamulka waqtiga dhabta ah. Raadinta iyo hanti dhowrka taariikhda mashruuca. Sharax oo calaamadee warbixinnada ku saabsan duulimaadka. Ku martiqaad dadka mashaariicdaada si aad ugala hadasho oo aad u wadaagto horumarka. Ku dhiirrigeli ka-qaybgalka waqtiga-dhabta ah. Cudur ama emayl ku soo dir warbixinnada iyo dashboodyada adoo isticmaalaya liisaska qaybinta
Barnaamijyo horay loo sii dhisay - Barnaamijyada GoodData waxay si otomaatig ah ugu xirmaan ilaha xogta guud sida Google Analytics, Salesforce iyo Zendesk, maaddaama dhammaantood lagu dhisay barnaamijka 'GoodData', waad ku fidi kartaa si fudud adoo ku darya xogta ama qaabeynaya cabirrada ka tarjumaya baahiyahaaga ganacsi ee gaarka ah.
Haddii aad tahay tikniyoolajiyad internetka ah oo xog leh, sidoo kale waxaad noqon kartaa a lamaanaha xogta ee GoodData. GoodData waxay soo bandhigeysaa awooda lagu soo saaro dhameystiran Analytics badeecada suuqa 90 maalmood gudahood iyada oo aan dadaal injineernimo weyn. Macaamiishaadu waxay marin buuxa u helayaan dhammaan barnaamijyada 'GoodData': dashboodyo horay loo dhisay, muuqaaleed hormarsan, gogo 'iyo jajab, metrikyada caadiga ah, iskaashiga iyo waxyaabo kale oo badan.
Tags: bisirdoonka ganacsigagooddataSuuqgeynta Webinarsaassoftware adeeg ahaan
Sida Loo Noqdo Barnaamij Sameeyaha Mobilka
Muxuu Facebook Kaliya Uga Jarin